သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော်
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Virus » သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော်
1 သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 4th May 2009, 8:30 pm
အခုmail လောကထဲမှာ hallmark ဆိုတဲ့ virus တွေ့ နေရတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မေးထဲကို Hallmark ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပို့ စ်စကဒ်လေးတွေ့ ပို့ တယ်ပေါ့။ ဒီအတိုင်းတော့ပိုစ့်စကဒ်ကိုယူလို့ မရပါဘူး။ link ပေးထားပါတယ် ။ ဒေါင်းခိုင်းတယ်ပေါ့ down ဆိုတဲ့ link ကိုနှိပ်မိရင်တော့ စက္ကန့် အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ restart ကျသွားပါတယ်။ပြီးရင်တော့စက်ကို အပြင်ဆိုင်ပို့ စရာမလိုပါဘူး။ memory card သာဖြုတ်လဲလိုက်ပါ။အသစ်အတိုင်းပြန်ရပါမယ်။
သူ့ ရဲ့ function ကတော့ memory ကိုရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တွေ့ ရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်ကြပါ။
2 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 9th May 2009, 7:07 pm
ကျေးဇူးပါ.. အခု လို သတိ ပေးတဲ့ အတွက် .. ကျွန်တော့လို link မြင်မြင်တာ မှန်သမျှ အကုန် လျှောက်နှိပ်တဲ့ လူ အတွက် တော်တော် ကောင်းပါတယ် .. ကျေးဇူး .....
3 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 10th May 2009, 7:01 pm
မြင်မြင်သမျှသင်္ခါရတော့မလုပ်လေနဲ့................. နှစ်ကောင်ပေါင်းကိုက်လို့ .................Harddisk ကော Memory ပါပျက်သွားမှ ဆိုင်ကိုအလှူပေးနေရအုံးမယ်..........
အမျှ အမျှ အမျှ.........
ကိုထက်ရေ စကားမစပ်ဗျာ ........သူများတွေအားကျပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း virus ရေးချင်တယ်။ဒါပေမယ့် သူများတွေလို့ system ကိုမထိပဲနဲ့ကျွန်တော်က Monitor ကိုပျက်အောင်ရေး ချင်တယ် ကူညီအုံးဗျာ................
4 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 10th May 2009, 7:16 pm
မယုံရင် Admin ကို မေးကြည့် သူဖြေလိမ့်မယ်
5 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 10th May 2009, 7:35 pm
အတို့အထောင်က စပြီ SYKO တို့က...
6 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 10th May 2009, 7:49 pm
ကြောမလားမကြောဘူးလား......................ရေးကြီးသားလေးရှိယင်လည်း share လိုက်နော် .......ဟီ ဟီ ......မရရင်တွေ့ မယ်........ဘီဘီအ၀တိုက်ခိုင်းမယ် :p_a1:
7 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 10th May 2009, 7:52 pm
8 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 11th June 2009, 2:18 pm
9 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 11th June 2009, 8:54 pm
တစ်နည်းတော့သိတယ်..... ရေနဲ့ဆားနဲ့ဆတူဖျော်ပြီးတော့ CRT ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်...LCD ဆိုရင် လေးပေအမြင့်လောက်ကနေ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပြီးပစ်ချလို့...သိပ်ကိုလွယ်တယ်...
10 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 30th June 2009, 5:01 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-06-29
For Your WARNING.(virus news)
11 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 25th September 2009, 1:19 pm
မော်နီတာပျက်တဲ့ virus ရေးချင်တာလား ကိုဘီလူး လုပ်လိုက်လေ ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်..
သူများကိုတော့မဟုတ်ဖူး။ ကျွန်တော် မော်နီတာကို ဖျက်ချင်နေလို့ .... မပျက်ရင် အသစ်ဝယ်မပေးဘူး တဲ့ဗျာ.. နည်းလေးတွေ့ရင် ... အနော့်ကိုလည်း မေ့ရဘူးနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
12 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 20th November 2009, 8:15 am
ကျွန်တော် မသိသော ကျွန်တော
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-19
မော်နီတာပျက်တဲ့ virus တော့မသိဘူး သိချင်ရင် ကွန်ပျူတာ ပေါက်ကွဲတဲ့ virus ရှိတယ်ယူမလား
13 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 14th April 2010, 7:55 pm
volt 400 =3phs ပေးရင် မော်နီတာ လစ်ပြီအကို အလွယ်ဆုံးနည်းနော်။အဲvirus ကတောဆိုးတယ်။
14 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 18th April 2010, 11:43 am
မစမ်းဘဲနဲ့ဖတ်တာနဲ့တောင် ကျောချမ်းတယ်နော့....လုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ အလကားနေရင်းတောင် ဒေတာတွေ
ခဏခဏပျက်နေတာ ဝင်းဒိုးခဏခဏတင်နေရတာ နောက်ဆို အာမခံကဒ်နဲ့ ဆိုင်ပါခဏခဏ ပြေးရမယ်
တားတား ကြောက်ကြောက်..... [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော် on 7th April 2011, 7:28 pm
16 Re: သတိ သတိ သတိ ပေးတယ်နော်